प्रतिपक्षी पनि भेटिएन - परिहास - नेपाल
सरकार त भेटिएन भेटिएन, यतिबेला प्रतिपक्षी पनि भेटिइरहेको छैन । कहाँ गए प्रतिपक्षी ? प्रतिपक्षीको चाइँचुइँ सुनिँदैन । सरकार त कहिलेकाहीँ महँगी बढाएर, प्रदर्शनमाथि दमन चलाएर, आदि/इत्यादि गरेर भए पनि प्रकट भइरहेको हुन्छ । प्रतिपक्षी त त्यति पनि प्रकट भएन । हराएको हरायै छ । न सडकमा छ, न त संसदमा । यदि प्रतिपक्षी नै यसरी गायब भइदियो भने हाम्रो लोकतन्त्रको कल्याण कसरी होला ? किनभने प्रतिपक्षीबिना लोकतन्त्रै चल्दैन । अनि, प्रतिपक्षी यसरी लोकतन्त्रै खतरामा पर्ने गरी बेपत्ता हुन मिल्छ ?
प्रकाशित: मंसिर २५, २०७५